China Cast Iron Butterfly Valve ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - မှတ်တိုင်
အိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လိပ်ပြာအဆို့ရှင် > သံ Butterfly အဆို့ရှင်ကိုသွန်းပါ
ဒါ့အပြင် flap valve လို့လည်းခေါ်တဲ့သံသတ္တုစပ်အဆို့ရှင်ဟာရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ထိန်းညှိထားတဲ့အဆို့ရှင်ဖြစ်ပြီး၊ အဲဒါကိုဖိအားနိမ့်တဲ့ပိုက်လိုင်းမီဒီယာတွေကို On-off control အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Milestone Valve ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သောသံသတ္တုစပ်အဆို့ရှင်သည်အဆင့်မြင့်အရည်အသွေးရှိပြီးကောင်းမွန်သောတံဆိပ်ခတ်စွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်သည်။ အစားအစာ၊ ဆေးဝါး၊ ဓာတုဗေဒစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရေနံ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ အထည်အလိပ်၊ စက္ကူထုတ်လုပ်ခြင်းစသည့်ရေပေးဝေရေးနှင့်ရေနုတ်မြောင်းများနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများအတွက်သင့်လျော်သည်။ စီးဆင်းမှုကိုထိန်းညှိခြင်းနှင့်ကြားဖြတ်ယူခြင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်အနေဖြင့်သံသံလိပ်ပြာအဆို့ရှင်၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်တည်ငြိမ်ပြီးသုံးစွဲသူအများစုကကောင်းစွာလက်ခံကြသည်။
2. Cast iron butterfly အဆို့ရှင်၏ Parameters:
Valve အမျိုးအစား သံလိပ်ပြာအဆို့ရှင်ကိုသွန်းလေ၏
ဒီဇိုင်းအပူချိန် Range -15â "1ž150â"
ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစား: အနားကွပ်, Wafer, Butt ဂဟေ, Lug
Actuator အမျိုးအစား manual drive, pneumatic, Hydraulic (သို့) လျှပ်စစ် actuator
တံဆိပ်ခတ် ပျော့ပျောင်းသောတံဆိပ်ခတ်ထားသည့် Metal Hard Seal
သက်ဆိုင်ရာအလတ်စား ရေ၊ ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်အမျိုးမျိုးသောချေးပစ္စည်းများ
Disc ကွေးညွှတ်သံ, သံမဏိ
ပင်မ သံမဏိ, duplex သံမဏိ
တံဆိပ်ခတ် အိုလက်စွပ်၊ NBR၊ EPDM၊ FKM
၁။ သံသတ္တုစပ်အဆို့ရှင်သည်အရွယ်အစားသေးငယ်။ အလေးချိန်ပေါ့ပါးသည်၊ ဖြုတ်တပ်ရန်နှင့်ပြင်ရန်လွယ်ကူသည်။ မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။
2) သံသတ္တုစပ်အဆို့ရှင်သည်ရိုးရှင်းပြီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းပြီး ၉၀ ဒီဂရီလည်ပတ်ခြင်းဖြင့်လျင်မြန်စွာဖွင့်နိုင်သည်။
၃) သံအလိပ်ပြာအပေါက်များသည်သေးငယ်သောလည်ပတ်မှု torque၊ အလုပ်သမားချွေတာမှုနှင့်ပေါ့ပါးမှုရှိသည်။
၄။ သံအလိပ်ပြာအဆို့ရှင်၏အဖွင့်အပိတ်စစ်ဆေးမှုအကြိမ်အရေအတွက်သည်အဆ ၁၀၀၀၀ ခန့်ရှိပြီးသက်တမ်းသည်ရှည်ကြာသည်။
(၅) သံသတ္ထုစပ်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်များကိုအစားထိုးနိုင်သည်။ ယိုစိမ့်မှုမရှိသောနှစ်လမ်းသွားတံဆိပ်ခတ်ခြင်းကိုရရှိနိုင်သည်။
၆။ သံအလိပ်ပြာအဆို့ရှင်တံဆိပ်ခတ်ပစ္စည်းသည်အိုမင်းခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ချေးခြင်းနှင့်သက်တမ်းကြာရှည်ခြင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။
သံတိုင်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်အပလီကေးရှင်းဥပမာ ၅ ။
မော်လ်ဒိုက်ရှိဖောက်သည်တစ် ဦး ကဤသို့မေးသည် -
ရေနုတ်မြောင်းစနစ်အတွက်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်လိုအပ်သည်။ သံအလိပ်ပြာအဆို့ရှင်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသလား။ ဘယ်တာရှည်ခံ၊ သံမဏိအဆို့ရှင် (သို့) ကာဗွန်သံမဏိလိပ်ပြာအလား
အကယ်၍ ၎င်းကိုရေနုတ်မြောင်းစနစ်တွင်အသုံးပြုပါက၊ သံသံလိပ်ပြာအဆို့ရှင်သည်လုံလောက်သည်။ Cast iron butterfly အဆို့ရှင်၏ဆန့်နိုင်စွမ်းနှင့်အထွက်နှုန်းသည်ကာဗွန်သံမဏိပစ္စည်းများနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်။ ၎င်းကိုသာမန်ရေ၊ ဆားငန်၊ ရေငွေ့စသည်ဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ပိုက်စနစ်တွင်သံမဏိပစ္စည်းများမှချေးခြင်းနှင့်ဓာတ်တိုးနိုင်ခြင်းသည်ကာဗွန်သံမဏိပစ္စည်းများထက်ပင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာသံမဏိပစ္စည်းများသည်သွန်းရသည့်သံမဏိပစ္စည်းများထက် ပို၍ နည်းသည်။ သငျသညျရေနုတ်မြောင်းဘို့သင်တို့ကိုပြောသကဲ့သို့, သွန်းသံလိပ်ပြာအဆို့ရှင်ကိုသုံးနိုင်သည်။
A: အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်နှင့်စစ်ဆေးရန်အတွက်နမူနာအော်ဒါမှာယူသည်။ ရောထွေးသောနမူနာကိုလက်ခံသည်။
2. အဆို့ရှင်အမှာစာအတွက် MOQ ကန့်သတ်ချက်ရှိပါသလား။
ဖြေ - MOQ နည်းတာ၊ နမူနာစစ်ဆေးဖို့ ၁ ခုရရှိနိုင်ပါတယ်။
၃။ OEM ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးနိုင်မလား။
A: ဟုတ်တယ်၊ OEM ကလွယ်ပါတယ်။
A: ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၃၀% အပ်ငွေကိုလက်ခံပါသည်။ လက်ကျန်ငွေကိုသင်္ဘောမတင်မီပေးဆောင်ပါမည်။ L7C ဟာအဆင်ပြေပါတယ်
A: DN50-DN600 အရွယ်အစားအများစုတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အဆို့ရှင်များရှိသည်။ ၁ ပတ်မှ ၃ ပတ်အတွင်းအနီးဆုံးဆိပ်ကမ်း Tianjin သို့ပို့နိုင်သည်။
A: ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၂ လအာမခံဝန်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ကုန်ပို့သည့် နေ့မှစ၍ ၁၈ လပေးသည်။
hot Tags:: ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသည်၊ ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ထားသည့်ပမာဏ၊ အခမဲ့နမူနာ၊ တရုတ်ပြည်တွင်ပြုလုပ်ထားခြင်း၊ စျေးပေါ၊ စျေးနိမ့်၊ စျေးနှုန်း၊ ဈေးနှုန်း၊ စျေးနှုန်း၊
လိပ်ပြာ Valve စီတန်း
လိပ်စာ: Xiaozhan စက်မှုဇုန်၊ Jinnan ခရိုင်၊ Tianjin, တရုတ်
မူပိုင်ခွင့်© 2021 Milestone Valve ကုမ္ပဏီ - Butterfly Valve၊ ဂိတ် Valve၊ Ball Valve၊ Check Valve - မူပိုင်ခွင့်အားလုံးထားရှိပါသည်။